Fantaro ireo aretina mifindra amin'ny tsipika | Tontolo alika
Areti-mifindra vokarin'ny ticks
Ny fananana alika dia mety ho iray amin'ireo traikefa mahafa-po indrindra ananan'ny olombelona, ​​saingy mety ho izy koa Andraikitra lehibe. Izany dia satria, toa antsika, ny alika dia manana filàna tsy maintsy karakaraina, iray amin'izy ireo ny fahadiovana sy ny fahasalamana.
Na dia marina aza fa matetika ny alika dia maloto matetika, miankina amin'ny fahadiovana ny fahasalamana alika ananany. Izany dia satria, na dia miaro azy ireo aza ny palitaon'ny alika, dia miaro azy ireo koa izy ireo mety ho voan ny katsentsitra izany no miteraka aretina.
alika dia mety hahazo katsentsitra samihafa, na cutaneau na anatiny. Izany no antony maha-zava-dehibe ny mailo hatrany amin'ny fitazonana ny alika hadio sy ny fanamarihana raha misy katsentsitra ivelany.
1 Fa inona ireo katsentsitra ireo?
2 Ahoana ny fanesorana ny kongona?
Fa inona ireo katsentsitra ireo?
Iray amin'izany kongona, izay ampidirina amin'ny hoditry ny alika sy saka amin'ny ankapobeny. IRETO afaka hiparitaka sy hihamaro haingana be, ka mety hijaly ny alikanao aretina lehibe raha tafiditra ao anatin'ny vatanao izy ireo.
Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba ny tapakila ianao dia vakio hatrany ity lahatsoratra ity ary fantaro ny momba ireo zavatra samihafa tokony ho fantatrao momba azy ireo katsentsitra ratsy!
Ny fikitika, araka ny efa noresahintsika tetsy aloha, dia katsentsitra izay miaina amin'ny ran'ny biby hafa izy ireo. Manana tongotra 8 izy ireo ary ao amin'ny fianakaviana arachnid
kongona manana dingana 3 amin'ny fitomboana izy ireo. Ny voalohany dia ny dingana larva, nymph faharoa, ary ny fahatelo rehefa olon-dehibe. Isaky ny dingana tsirairay dia matetika ny tick dia manana mpampiantrano hafa, izay laniny amin'ny rany. Ny marika matetika hita amin'ny serfa dia matetika amin'ny fifindrana avy amin'ny larva mankany nymph.
Ny ticks dia tsy manana fahaizana mitsambikina avy amin'ny mpampiantrano. Ireo dia entanin'ny hamandoana, ny hovitrovitra ary ny hafanana, hahafahan'izy ireo mamantatra rehefa misy vahiny eo akaiky eo. Raha hiampita amin'ny mpampiantrano iray mankany amin'ny iray hafa, dia miandry torimaso ny kongona mandra-pandehan'izy ireo mamaky ny tadin'ny volo.
kongona hita na aiza na aizana dia amin'ny toetrandro mangatsiaka aza. Ohatra, any Etazonia dia misy tapakila isaky ny fanjakana.
kongona mahazaka maripana ambany dia ambany, mahazaka hatramin'ny 4 degre Celsius.
Aretin'ny Lyme, anaplasmosis ary ehrlichiosis, dia sasany amin'ireo aretina telo mampidi-doza indrindra ateraky ny fikolokoloana, satria ny roron'ny alikao no mifindra ao anatin'ny 4 ora monja.
Ahoana ny fanesorana ny kongona?
Voalohany dia mila mahita ny lohan'ny tick ianao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia halevina ao ambanin'ny hoditra izy io.
Asio peroxyde hidrogen any amin'ilay faritra.
Esory amin'ny tweezers ilay marika, satria amin'ireo no ahafahanao misintona mora foana ny tapakila ary samy manana ao amin'ny trano fidiovany ny tsirairay.
Mampiasà tweezer tsara tendrony.
Raiso ny lohan'ny tick ary apetraho eo akaikin'ny vava araka izany ny tweezers.
Sintomy mafy izany ary aza misalasala. Aza manodinkodina na mamily ireo tweezers hisintona azy, satria afaka misintona ny volon'alika rehefa manandrana manala azy ianao.
Esory ny tapa-tady amin'ny tadin'ny kofehy na volo-nify, aorio manodidina ny lohan'ilay izy ary akaiky ny hodiny araka izay azo atao.
Misintona ny fiafarana miakatra sy mihetsika mihetsiketsika sy mihetsika ary voila, esorina ny tsipika.
Tsy maintsy fantaro tsara ny vatan'ny alikao, raha misy ratra ianao, maratra na raha manotra matetika be any ho any. Tokony ho hitanao ihany koa raha misy teboka mainty hafahafa amin'ny vatana, satria azo inoana fa avy izany.
Rehefa mandro ny alikao, zahao tsara ary sorohy mba tsy hijaly amin'ny aretina amin'ireto katsentsitra pesky ireto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Areti-mifindra vokarin'ny ticks
Tasy amin'ny lalan-dranomason'ny alika: inona no antony?
Manao ahoana ny alika Basset hound